décembre 2017 - Page 3 sur 76 -
30/12/2017 admintriatra 0
Tsy nanadino ireo mponina mipetraka eny amin’ny faritra La Réunion Kely ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery sy ny vadiny Ramatoa Rajaonarimampianina Voahangy, indrindra amin’izao fiafaran’ny taona izao. Nahatsiaro manokana azy ireo izy mivady, ka nidina teny …Tohiny
Faritra Analamanga : Hanarina ny lalana simba eny Ambohibao Antehiroka
29/12/2017 admintriatra 0
Voalaza fa tetikasa mamarana ny asa ho an’ny taona 2017 ho an’ny Faritra Analamanga ny fanarenana ny lalana miainga eo Ambohidroa mivoaka any Ambohibao Antehiroka, izay tafiditra amin’ny Boriboritany fahenina. Araka izany, nidina ifotony nijery …Tohiny
Fiparitahan’ny fitaovam-piadiana : Basy miisa 51 tra-tehaky ny zandary
Noho ireny krizy sy ady ara-politika nandalo teto amin’ny firenena ireny, dia maro ny fitaovam-piadiana niparitaka ary saika basy natokana ho an’ny mpitandro ny filaminana avokoa no very tamin’ izany. Maro amin’izy ireny no mbola …Tohiny
Mireille Mialy Rakotomalala : Voatendry masoivoho any Japon
Notendrena teo anivon’ny Filankevitry ny Minisitra, omaly, ho « Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire » hisolotena an’i Madagasikara any Japon i Mireille Mialy Rakotomalala. Izy izany izao no ambasadaoro malagasy voalohany hiasa ao Japon, taorian’ny nanokafan’ny …Tohiny